South Africa whitewash Zimbabwe 3-0 to win ODI series
After restricting the hosts to a paltry 165 all out despite skipper Chigumbura's 90, South Africa romped home in just 27.2 overs for a 7-wicket win.
Associated Press |August 21, 2014, 7:20 PM IST
Bulawayo: A scintillating 84 from 75 balls by opener Quinton de Kock led South Africa to a seven-wicket win over Zimbabwe on Thursday and a 3-0 whitewash in the one-day international series.
Spurred on by De Kock, South Africa needed just 27.2 overs to reach 171 for 3 and easily chase down Zimbabwe's 165 all out at Queens Sports Club.
South Africa rested a string of top players through the series in Bulawayo and were still a class above the Zimbabweans.
Abbott removed Zimbabwe opener Hamilton Masakadza in the first over, De Lange (3 for 31) took a wicket off the first ball of the second over, and the Zimbabweans never recovered from being 4 for 2.
At 119 for 9 the home team were destined for a much lower total until some late hitting by captain Elton Chigumbura in a last-wicket partnership of 46 with Tinashe Panyangara. Chigumbura made 90 with 10 fours and two sixes and launched some big shots before he had his off stump knocked back by De Lange trying another heave to the leg side.
cricketcricket newsElton ChigumburaFaf du PlessisJP Duminyodi seriesqueens sports clubQuinton de KockSean WilliamsSouth AfricaZimbabwezimbabwe vs south africa 2014